Prospective Families - Somali — Baxter Academy for Technology and Science
Prospective Families - Somali
halkan riix halkan Somali
Machadka Baxter dugsiga sare ee adag, u diyaarinta kulliyada oo sare u qaadayo milkiilanimada ardayga ee waxbarashada oo dhinaca manhajka diirada saaro gaar ahaan sayniska, cilmiga farsamada, injineernimada iyo xisaab (STEM). Ardayda Machadka Baxter waxay bartaan dhibaatada, dhibaatooyinka caalamka dhabta ah, iyaga oo la isticmaalayo oo la dhisayo qalabyada cilmiga farsamada oo kaashanayo deegaanka iyo sayniska, injineerada iyo xirfadlayaasha kale.
Machadka Baxter waxay u dajiyaan filashooyin sare ardayda oo dhan, hormariyaan masuuliyada bulshada, sare u qaadaan cusbooneysiinta iyo hal abuurka, oo soo saaraa filashada caalamka ee qalanjabiyayaasha qarniga 21aad. Ardayda Machadka Baxter waxaa xiggay heerarka ku saleysan manhajka farshaxanka luuqada Ingiriiska, xisaabaha, sayniska, cilmiga bulshada, iyo farshaxanka. Xiliga qalinjabinta, ardayda waxay helayaan xirfadaha qarniga 21aad oo waxaa noo suurtogaleyso inaan sii wadno waxbarashadooda, oo ay ku guuleystaan, jaamacada ugu wanaagsan Mareykanka.
Machadka Baxter wuxuu u adeegaa ardayda leh xiisaha xoogan ee sayniska iyo cilmiga farsamada, injineernimada iyo xisaabaha. Waxaan bixinaa manhajka u diyaarinta kulliyada oo adag ee wato macalimiin wanaagsan oo hal abuur leh. Macalimiinteena waxay ku caawiyaan inay ku jaheeyaan ardayda inay dareen u hayaan, arday is jaheyso iyaga oo ka qeybgelinayo caqligooda oo ku dhiirogelinayo fikradahooda iyaga oo qaadanayo mashruuca cilmiga farsamada u badan ee waxbarashada ku saleysan.
Machadka Baxter wuxuu sidoo kale bixiyaa manhajka bani’aadnimo xoogan iyo luuqadaha ajaanibta si loogu diyaariyo ardayda inay noqdaan hogaamiyayaal anshax lehee dhaqaalaha caalamka qarniga 21aad.
Manhajka Wuxuu tilmaamaa:
● Hordhaca Sayniska Kumbuyuutarka
● Naqshadeynta Sawirka
● Fiisikiska Xisaabta Ku saleysan
● Baaritaanka dambiga
● Sayniska, Cilmiga farsamada, iyo Anshaxa
● Sheeko sheegida Dhijitaalka
● Bulsho Ku hadlida Hormarsan
● Keynta, Dhulka qoyan, iyo Dhulka Badda
● Hordhaca Nidaamyada Warbixinta Juquraafiga
JIMCADA SAACADAHA DABACSAN
Baxter waxaa ka go’an boqolkiiba 20 ee isbuuca oo ardayda maamusho, mashaariicda muddada dheer ee quseeyo danaha iyo hadafka arday walba. Kooxda ardayda waxay aqoonsadeen dhibaatada caalamka dhabta ah, qeexeen sida laga yaabo inay u xaliyaan, ugala hadlaan xalalkooda guddiga dib u eegida kulliyada, shabakada ee leh taqasusyada banaanka, iyo kadib u daji shaqada.
Ardayda qaar waxay dooran karaan inay ku shaqeeyaan koox balaaran oo lagu hormarinayo nooca tijaabada ee dhismaha kaluunka, kuwa kale waxay rabi karaan inay si shaqsi ah u shaqeeyaan iyaga oo ku qorayo barnaamijka goobta xogta ee shirkada deegaanka, tusaale ahaan.
Machadka Baxter waa dugsiga jaatarka bulshada oo bilaash ayuu u yahay ardayda oo dhan. Maalgelinta bulshada ayaa xiggo arday walba ee ka imaanayo guriga dugsiga degmada. Dhammaan ardayda Maine ee galeyso fasalada 9, 10, iyo 11 waxay u qalmaan inay ka qeybgalaan Machadka Baxter sida arday cusub oo 2019-2020 oo leh fursad simman ee ogolaanshaha (oo lagu go’aansaday baqtiyaanasiibka codsadaha—ama, kadib nidaamka baqtiyaanasiibka, ee liiska sugitaanka qofka soo hormaro, loo hor adeego). Machadka Baxter wuxuu u adeegayaa fasalada 9-12 ee 2019-2020.
Anigu waxaan ahay arday mustaqbalka ah...
Waxaan ahay arday la aqbalo…